Ukudityaniswa kunye nokuzenzekelayo zizinto ezimbini endisoloko ndizenza kubathengi… abathengisi kufuneka bachithe ixesha labo ukwenza umyalezo wabo, besebenza kuyilo lwabo, kwaye bajolise kumthengi ngomyalezo umthengi afuna ukuwuva. Akufanele bachithe lonke ixesha labo behambisa idatha ukusuka kwenye indawo ukuya kwenye. Kuyinkolelo yam ukuba iiMashups lulwandiso lokudityaniswa kunye nokuzenzekelayo kwiwebhu.
I-Mashups kwiwebhu ihlala ine-2 okanye ngaphezulu kwesicelo senkqubo. Umzekelo unokuba ungaphezulu komsebenzi wentlalo kwimephu zikaGoogle usebenzisa zombini i-Twitter API kunye neMephu zikaGoogle API. Ayizizo nje izinto zokuzonwabisa kunye nezixhobo kwakhona, kukho amaqonga aliqela asele elungile kushishino kule mihla- ukudibanisa ukukhangela, ezentlalo, iCRM, i-imeyile kunye neminye imithombo yedatha ukuvelisa iinkqubo ezibanzi ezisingatha imisebenzi ezintsonkothileyo kunye nokudityaniswa kwemisebenzi.
Kwiminyaka yakutshanje, ixesha sibanisa phezulu amaxesha amaninzi kubhekiswa kwimveliso yevidiyo kunye nevidiyo apho imithombo emibini okanye nangaphezulu yevidiyo okanye umculo udityanisiwe. Nanku umzekelo omkhulu- i-AC / DC kunye neeBee Gees: